प्रचण्डको क्षेत्रमा को बलियो ? « Naya Page
प्रचण्डको क्षेत्रमा को बलियो ?
चितवन : आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उम्मेदवारी दिने भएपछि देशभर चर्चा छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धनको भन्दा आठ हजार बढी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
वाम गठबन्धनको मत क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने भरतपुरका १९ वटा वडामा एमालेले कुल २१ हजार पाँच सय ३९ मत पाएको छ । त्यस्तै, माडी नगरपालिकामा चार हजार दुई सय ३८ मत ल्याएको छ । यस क्षेत्रमा एमालेको कुल मत २५ हजार सात सय ७७ छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मत क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने भरतपुरका १९ वटा वडामा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको कुल मत २३ हजार चार सय ८७ छ । माडी नगरपालिकामा कांग्रेसको वडाध्यक्षले तीन हजार चार सय ३६ मत प्राप्त गरेका छन् । दुवै गरी कांग्रेसको कुल मत २६ हजार नौ सय २३ छ।
वडामा एमाले बलियो क्षेत्र नम्बर ३ मा भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाका २८ वटा वडा छन् । जसमा एमालेका १२ वडाध्यक्ष विजयी भएका छन् । माओवादीले ६ वटा वडा जितेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसको १० वटा वडा जित्दा राप्रपाले कुनैमा पनि जित हासिल गर्न सकेन ।
वडामा एमाले बलियो
काठमाडौं, ६ बैसाख । एमाले विवाद औपचारिक रूपमा विभाजनउन्मुख भएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल